Fetim-pirenena 2016 any Reggio-Emilia.
Ity ny fanasana ho anareo any amin'ny Faritra Emilia-Romagna sy ny manodidina amin'ny fankalazana ny 26 jiona.tohiny
Fetim-pirenena 2016 any Milan.
Ity izany ny fanasana amin'ny fankalazana ny fetin'ny Fahaleovantena ho anareo any amin'ny faritra Lombardia sy ny manodidina any.tohiny
Toa ny mahazatra dia mandray anjara amin'ny fety karakarain'ny Migrantes antsoina hoe "Festa dei Popoli" indray isika Malagasy eto Italia. Hisy ny stand mampiseho ny ankohonana malagasy sy i Madagasikara, mandritra ny lamesa dia hisy hira malagasy, ary ny tolakandro dia hisy dihy hataon'ireo... tohiny
Misaotra ny Malagasy rehetra eto Italia
Nahafinaritra ny fiarahana niala voly omaly. Nofidina manko ny fetin'ny asa mba hisaorana indrindra sy hirarian-tsoa ny Mpiandraiki-draharaha vaovao, Andriamatoa Dama RAKOTONDRASEDO sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny masoivohontsika eto Roma. Tamin-kafaliana koa no niarahabana sy nandraisana ny... tohiny
Fetin'ny Fikambanana Fraternità Malgascia
Faly manasa antsika hikorana indray ny FRA.MA (Fraternità Malgascia) amin'ny 18 jiona ho avy izao, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ka hatramin'ny 11 ora sy sasany alina . Ny toerana dia eny amin'ny efa falehantsika mahazatra : via Gabriele degli Espositi, 93 (Selva Nera - Casalotti). Fandraisana... tohiny
Fiaraha-miala voly 1er mai eny amin'ny ambassade
An-kafaliana no iantsoana antsika Malagasy rehetra manerana an'i Italia mba hiaraka hiala voly kely ny tontoloandron'ny alahady 1er mey izao. Samia mitondra sakafo hiaraha-mizara, indrindra koa hena manta ho atonontsika rehefa tolaka iny ny andro. Toy ny fanaontsika manko dia mba mitsangatsangana... tohiny
Fanavaozana passeport 2016
Araka ny fanambarana azo avy any amin'ny masoivohon'i Madagasikara dia hisy ny fanavaozana passeport ho an'ireo izay manana passeport lany daty amin'ity taona 2016 ity. Ka amin'ny 20-21-22 mey izao no hanaovana izany ao amin'ny masoivoho araka ny filazana eto ambany sy araka ny voalaza ao amin'ny... tohiny
Fitsangatsanganana any Subiaco Lundi de Paques
Araka ny nampitaina taty aminay dia mikarakara Lundi de Pâques ny fikambanana TeFi (Terak'i Fianarantsoa) ka any Subiaco no hanaovana izany izay anasàna ny malagasy rehetra eto Roma sy ny manodidina. Ny toerana dia ao akaikin'ny Fiangonana San Francesco (Via San Francesco) Misy Bus Cotral miala eo... tohiny
Hetsika 'Da Malgasci in Madagascar a Malgasci in Italia'
Ny zoma 4 martsa teo no natao teny amin’ny foiben’ny Fikambanana Mais Onlus ny fihaonana " Da Malgasci in Madagascar a Malgasci in Italia ", nampahafantarana antsika Malagasy eto Italia. Azo atao hoe andiany faharoa izy io, raha tamin’ny volana jiona tamin’ny taon-dasa no efa nisy ny voalohany. Ny... tohiny
Vieni con noi, aumenta la gioia, Hafaliana
Ny fikambanan-drelijiozy Maestre Pie Venerini eto Roma dia manasa antsika mianakavy hanotrona ny takarivam-pikoranana karakarainy miaraka amin'ny Fikambanana " Una Goccia per il Madagascar ", ny alahady 7 febroary ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora sy sasany hariva ka hatramin'ny 8 ora alina eny... tohiny